Villa emasimini aluhlaza - I-Airbnb
Villa emasimini aluhlaza
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Rianne
Indlu iyindawo ekahle nje yokuhlala yombhangqwana noma umndeni noma noma kuyibhizinisi elikulethela lapha. Itholakala emaphandleni, ibheke izinkundla ezibanzi nxazonke zendlu kanye nenkundla yegalofu ngemuva kwengadi yethu.
Amamitha angu-150 nje ukusuka eZoo nasezinkundleni zokudlala. Indlu yakhelwe ngesitayela futhi ifakwe yonke into ongayicabanga. Indlu yonke inengadi yangasese egcinwe kahle enotshani (ngaphambili nangemuva) kanye nobumfihlo obuningi nezindawo zokudlala izingane. Eduze kwendlu kunensimu ebiyelwe enezilwane ezimbalwa (inkomo eseyahlala phansi, izimbongolo ezi-2, amahansi ama-4, izingulube ezi-2)
Amamitha angu-150 nje ukusuka eZoo nasezinkundleni zokudlala. Le ndlu ingaphansi kwegquma elingu-(60 mtr) elibizwa ngokuthi 'uphahla lwe-brabant' kuleli gquma kukhona umzila webhayisikili lezintaba futhi nxazonke zegquma kune-Gulbergen Golf course. Indawo ezungeze indlu kanye nengadi enezihlahla ezivuthiwe kugcwele izinyoni , kuyajabulisa ukuzibona zifika zihamba usuku lonke ! Indawo ezungeze indlu yaziwa ngokuvakashela onogolantethe abaningi kusukela ngoMashi kuze kube uSepthemba.
Ebangeni lokuhamba lika-100 mtrs ukuya ku-2 km kunezindawo zokudlela ezinhle ezi-3.
Sinenkampani ethengisa ohhavini abashiswa ngamapulangwe kumakhasimende asekhaya nasemsebenzini; sisebenza ehhovisi endlini yethu futhi sibe nendawo yethu yedemo phakathi kwendlu yethu nendlu eqashisayo; Uma ufuna ikilasi le-master in pizza yokubhaka; vele usazise futhi singakuhlela
Sinenkampani ethengisa ohhavini abashiswa ngamapulangwe kumakhasimende asekhaya nasemsebenzini; sisebenza ehhovisi endlini yethu futhi sibe nendawo yethu yedemo phakathi kwendlu ye…